Intii lagu gudajiray howsha wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah ee ganacsiga, waxaa jira qalab muhiim ah oo door muhiim ah ka ciyaara marxaladda halsano ee qashinka haraaga ah - mashiinka rogaya compost, waxaan soo bandhigi doonnaa waxoogaa aqoon aasaasi ah oo ku saabsan leexinta compost, oo ay ku jiraan shaqooyinkiisa, noocyadiisa iyo sida loo doorto mid ku habboon.
Shaqada rogayaasha compost
Compost Turner wuxuu noqday qalabka udub dhexaad u ah nafaqeynta aerobic-ka iyadoo loo eegayo saameynta muhiimka ah ee compost iyo halsano.
Function Isku qasida howlaha isku darsiga alaabta ceyriinka ah: marka la isku daro, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro waxyaabo yar yar si loo hagaajiyo saamiga nitrogen kaarboon, qiimaha pH iyo biyaha waxyaabaha ceeriin. Qalabka ceyriin ee ugu muhiimsan iyo walxaha yar yar ee la isu geeyay iyadoo loo eegayo saamiga qaarkood waxaa si isku mid ah isugu qasan kara xirfadle compost jeediyaha si loo wanaajiyo.
Isku hagaaji heerkulka alaabada ceeriin: inta lagu gudajiro howsha, leexiyaha compost wuxuu ka dhigi karaa alaabta ceeriin inay si buuxda ula xiriiraan oo ay ku dhexgalaan hawo, taas oo habeyn karta heerkulka meeraha si habboon. Hawada ayaa ka caawisa sheyga aerobic-ka inay si firfircoon u soo saaraan kuleylka kuleylka, heerkulka meeriska oo kordha. Dhanka kale, haddii qandhada kulka ay sarreyso, geddisyada leexintu waxay keeni karaan hawo nadiif ah, taas oo hoos u dhigi karta heerkulka. Iyo nooleyaal badan oo faa iido leh ayaa koraan kuna tarma kala duwanaanta heerkulka la qabsiga.
♦ Wanaajinta isu-geynta walxaha isku-xidhka ah: Nidaamka isku-dhafka ayaa sidoo kale burburin kara usha iyo alaabada ceyriinka ah oo isu rogi kara tiro yar, taas oo ka dhigaysa tuulbooyin jilicsan, fidsan oo leh dabacsanaan ku habboon, taas oo ahayd halbeeg muhiim ah oo lagu cabbiro waxqabadka compost leeyaha.
Isku hagaajinta qoyaanka alaabta ceeriin ee isku urursan: Biyaha ku jira alaabta ceeriin ee halsano waa in lagu xakameeyo 55%. Halsano, falcelinta kiimikada kiimikada ayaa soo saari doonta qoyaan cusub, iyo isticmaalka jeermiska walxaha ceyriinka ah ayaa qoyaanku lumin doonaa sideha oo xoreyn doonaa. Sidaa darteed, iyadoo la yareynayo waqtiga qoyaanka ee geeddi socodka halsano, marka lagu daro uumi-baxa ay sameeyeen kuleylka kuleylka, leexashada alaabta ceeriin ee ku urursanmashiinka rogayaasha compost sidoo kale waxay samayn doontaa uumi bax qasab ah oo uumiga biyaha ah.
Markuu garwaaqsaday shuruudaha gaarka ah ee habka bacriminta: tusaale ahaan, leexleeyaha compost garan karay shuruudaha burburinta alaabta ceeriin iyo leexashada joogtada ah.
Mashiinka bacriminta wuxuu halsano ka dhigayaa fudud, wareegyo gaagaaban wuxuuna gaarayaa saameynta halsano ee la filayo. Kuwa soo socdaa waa dhowr mashiin oo leexleeya compost.
Types ee leexinta compost
Saxan silsilad Compost Turner
Taxanahan leexinta compost ayaa si aad ah loo qaabeeyey, silsiladda oo adeegsaneysa qaybo tayo sare leh oo waara. Nidaamka Haydarooliga waxaa loo isticmaalaa qaadista iyo hoos u dhaca, iyo qoto dheer wareegga ayaa gaari kara 1.8-3 mitir. Qalabka dhererkiisa toosan wuxuu gaari karaa 2 mitir. Waa
samayn karaa shaqada leexashada si dhakhso ah, si wax ku ool ah oo leh koronto lagu daray. Astaamaha qaabeynta isafgarad, hawlgal fudud iyo keydinta goobta shaqada, mashiinkan bacriminta waxaa si habboon loogu isticmaali karaa qeybaha kala duwan ee alaabta ceyriinka ah, sida digada xoolaha, dhoobada guryaha, qashinka cuntada, qashinka dabiiciga ah ee beeraha iyo wixii la mid ah.
Nooca Groove Compost Turner
Waxay qaadataa silsiladda wadista iyo duubista qaabdhismeedka saxanka taageerada leh iska caabin yar oo rogista, keydinta tamarta oo ku habboon hawlgalka nafaqeynta qoto dheer ee jeexdin. Ka sokow, waxay leedahay karti jajab iyo qalabku wuxuu leeyahay saameyn wanaagsan oo ah buuxinta oksijiinta. Dhaqdhaqaaqiisa jiifka ah iyo kan toosanba wuxuu ku ogaan karaa qalliinka leexashada meel kasta oo jeexdin ah, taas oo dabacsan. Laakiin sidoo kale waxay leedahay xaddidaad inay ku shaqeyn karto oo keliya taangiga halsano, sidaa darteed xulashada kani waxay u baahan tahay in la dhiso taangiga halsano ee isku aaddan.
Nooca Crawler Compost Turner
Tani nooca gurguurashada rogaha waa qalab si gaar ah loogu talagalay in lagu bacrimiyo window iyo tikniyoolajiyadda halsano si loo soo saaro bacriminta dabiiciga ah. Kaliya kuma habboona bannaanka bannaan, laakiin sidoo kale aqoon isweydaarsiga iyo aqalka dhirta lagu koriyo. Waxay leedahay la qabsi xoog leh, waxqabad aamin ah oo la isku halleyn karo, iyo dayactir ku habboon. Marka loo eego mabda'a astaamaha aerobic, makiinadani waxay siineysaa meel ku filan bakteeriyada zymogeneous si ay u ciyaarto doorkeeda.
Nooca giraangirta Compost Turner
Mashiinka Gawaarida Noocyada Gawaarida Gawaarida waa qalab isdaba-marin iyo otomatig ah oo otomaatik ah oo leh taako dhaadheer iyo qoto dheer oo ah digada xoolaha, dhoobada iyo qashinka, dhoobada sifeynta, keegga digaagga ee liita iyo balka cawska ee miraha sonkorta, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa halsano iyo fuuqbax dhirta bacriminta dabiiciga ah, dhirta bacriminta isku dhafan, warshadaha qashinka iyo qashinka, beeraha beerta iyo dhirta loo yaqaan 'bismuth'.
Tilmaamaha doorashada xulashada compost
Haddii aad uun soo galayso suuqa, ama aad khibrad u leedahay isku-darka, su'aalaha marwalba waxay soo if baxaan oo ku saabsan nooca rooga qashinka ee sida ugu habboon ugu habboon baahidaada iyo khadka hoose. Xulashooyinku aad ayey u yaraanayaan markii la tixgeliyo sababaha, xaaladaha iyo ujeeddooyinka hawlgalka nafaqeynta.
Markii aad wax iibsaneysid, hubi in qalabku yahay mid aamin ah oo lagu kalsoonaan karo.
Soo saarida leexiyaha compost gaar ah waxaa lagu go'aamiyaa xawaaraha socdaalkiisa shaqo iyo cabbirka windrowga ay xamili karto.
● Ku xusho leexinta compost sida ku cad qalabka dhabta ah ee soo baxa iyo soo noqoshada. Mashiinada waaweyn iyo kuwa ka awooda badan guud ahaan waxay leeyihiin qiimayaal wax soo saar badan maxaa yeelay waxay farsameeyaan waxyaalo waaweyn oo ceeriin ah.
● Sidoo kale tixgeli baahida bannaan ee mashiinka composte. Nooca gurguurashada compost leexinta wuxuu u baahnaan doonaa boos jaanis yar ka dibna moodooyin kale.
● Kharashka iyo miisaaniyadda, dabcan, waxay sidoo kale saameyn ku leeyihiin xulashada aaladaha lagu bacrimiyo. Mashiinka leh wax soo saar ballaaran iyo awood wuxuu lahaan lahaa qiima sare, markaa dooro midka ku habboon.
Marka la soo koobo, markasta, waxaad kaga jawaabi kartaa Mareykanka.